Ndiri mukomana ane makore 29 | Kwayedza
Ndiri mukomana ane makore 29
21 Aug, 2014 - 00:08	 2014-08-21T09:08:45+00:00 2014-08-21T00:00:49+00:00 0 Views
MAKADII henyu? Ini ndinogara kuDurban kuSouth Africa, ndiri musikana asina kumboita mwana kana kuroorwa. Ndinoda murume ari pachokwadi ari pedyo nekwandiri ane makore anobvira pa23 zvichikwira, nhamba dzangu dzangu idzo 27 610 489 224.
Ndiri mukomana ane makore 29 ndinotsvagawo musikana wekuroora. Anoda ngaafone pa0775 091 004.
Ini ndiri mudzimai ane makore 34, ndakafirwa nemurume uye ndiri kutsvaga murume ane makore 35 zvichikwira ari HIV positive anoda kuroora. Matsotsi kwete nekuti ndaneta nawo. Anoda ngaafone pa0773 230 221.
Makadii henyu? Vose vaifona pa0772 239 583 chiregai henyu, zvakaita. Ndinotenda zvikuru.
Ndiri musikana ane makore 21 ndinotsvagawo mukomana anoda zvekuroora ane makore 22 kusvika 30, matsotsi chimbomirai. Vanoda tumirai masms kwete pa0779 717 273.
Ndiri mukadzi ane makore 36 nevana vatatu ndinoshanda basa remumba, mazirudo azere uye ndinoda murume anotya Mwari ane mazirudo ane makore 40 – 48. Call me back kwete, nhamba dzangu idzi 0771 746 729.
Ndiri mukadzi ane makore 29 nevana 2, ndinoshanda uye ndiri kutsvagawo murume ari kuda zvekumisa imba, anotya Mwari ane makore 30 – 35. Anofarira kuenda kunoongororwa ropa achibva kuManicaland, ngaandibate pa0733 216 234.
Makadiiko veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 37 nevana vaviri, ndiri kutsvaga mukadzi anoda kuve amai vemba. Ndinoshanda uye handirware, vanoda nhamba dzangu idzi 0771 736 647.
Ndiri murume ane makore 40 ndinoera Mhofu uye ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 33 kusvika 39. Ngaave mutsvuku akanaka, mukobvu ari mupfupi ane mwana 1 kana 2, anoshanda kana kuzvibatira nemawoko ake. Ini ndinoshanda uyezve ndine mwana 1, anondidawo ndibate pa0712 951 573. Tumirai masms kwete call me back. Vanoda kutambisirana nguva kwete ndapota hangu nekuti ndaneta nematsotsi.
Ndiri mukadzi ane makore 31 nevana vatatu. Varume vanoda zvekuroora fonai kana kutumira sms pa0771 010 245.
Ndiri musikana ane makore 23 ndinotsvagavo mukomana ane makore 28 asina kumboroora anobva kwaRusape. Ngaave anoshanda, ini ndinoshanda basa remumba kana paine andifarira ngaandibate pa0783 732 422.
Ndiri murume ane makore 39 nevana ndinoda mukadzi ari pachokwadi ane vana vakewo ane makore 30 zvichikwira. Ndibatei pa0713 211 356.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 39 ndinotsvagawo murume ane makore 42 zvichienda mberi, anoda zvekuroora. Nhamba dzangu 0772 708 248
Makadini? Ini ndiri mukadzi ane makore 24 nevana vatatu ndinodawo murume wekuroorwa naye ane vana vakewo ane makore 30 kusvika 36, akashambidzika. Vanoda ndibatei pa0717 019 960.
Ndiri mukadzi ane makore 41 nemwana mumwe chete ndinotsvagawo murume ane makore 42 kusvika 50 ane vana vakewo. Ndinoita basa remawoko, anoda ngaandibate pa0774 356 055 asi vanoda zvekutamba musafone henyu.
Ndiri murume ane makore 27 nemwana mumwe chete ndinodawo mukadzi ane mwana mumwe chete. Ndiri pamapiritsi, mukadzi akatendeka ngaandibate pa0783 162 482.
Ndiri mukomana ane makore 34 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 20 kusvika 30 kana mukadzi ane mwana wake anoda zvepamusha, anonamata. Nhamba dzangu 0717 201 336.
Makadini? Ndiri murume ane makore 29 ndiri HIV negative uye ndiri mukoti. Ndinotsvagawo musikana akanaka anoshanda semukoti, murairidzi kana rimwe basa rinoyemurika ane makore 19-26 ari HIV negative seni. Vanoda ndibatei pa0716 610 734 asi vakadzi vevanhu, pfambi nevanobhipa kwete.
Ndiri mudzimai ane makore 35 ndinotsvagawo murume ari HIV negative anonamata, kunyanya kumasowe, ane zvaanoita muupenyu. Ane makore 40 kusvika 55 anoda anondibata pa0782 287 349.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 20 asina mwana ari HIV negative. Anotya Mwari achida zvemba ngaandifonere pa0779 000 538.
Ndiri murume ane makore 43 ekuberekwa ndinotsvaka mukadzi anoziva nhamo ane makore 30 -35 ari positive seni. Ini ndinoita zvekutengesa pamusika saka vanoda havo ngavandibate neWhatsApp kana kufona pa0736 118 795.
Ini ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvaka musikana ane makore 18 – 22. Anoda ngaandibate pa0734 028 706.
Ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore ari pakati pe18-23. Ini ndine makore 26 uye ndinoshanda muHurumende. Vanoda ndibatei pa0783 939 326.
Ndiri mudzimai ane makore 45 ndinodawo shamwarirume ine makore 45 kusvika 60. Anonamata, ari pachokwadi ngaandibate pa0715 001 869 asi call me back kwete.
Ndine makore 30 uye ndinodawo mukadzi ane makore 20-25. Nhamba dzangu 0772 279 569, ndatenda!
Ndiri mukadzi ane makore 42 nevana 3 ndiri kutsvagawo murume anoda zvekuroora. Vane vakadzi musafone zvenyu, nhamba dzangu 0782 278 748.
Ndinotenda nechirongwa cheTishamwaridzane vose vaifona pa0717 146 748 chiregedzai zvenyu.
Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvaka musikana ane makore 18 kusvika 27. Ndiri HIV negative, nhamba dzangu idzi 0783 809 575.
Ndinotsvaga mudzimai wekuroora ane makore 25 zvichikwira kusvika pa38. Ini ndine makore 40 nemwana 1. Vanoda ndibatei pa0733 373 403.
Ndiri mudzimai wechidiki ane makore 26 nevana 2 ndiri kutsvagawo murume ane makore 28 kusvika 35 anoshanda. Andifarira ngaandibate panhamba idzi 0734 405 835.
Ndiri murume ane makore 32 ndiri kutsvagawo mukadzi ane makore 22 – 27 ari pamushonga asi akati simbei. Asingakari mari uye asiri musalad. Anoda zvekuroorwa nhamba dzangu 0737 809 454.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 33 nemwana mumwe ndinodawo mukadzi ane makore 25 mutete anoda zveimba. Ndibatei chere nguva pa0734 835 414.
Ndiri mukomana ane makore 18 ndinodzidza kuMSU uye ndinotsvakawo musikana ane makore 18. Nhamba dzangu 0783 796 951.
Ndiri musikana ane makore 26 ndinodawo murume ane makore 28 kusvika 35 asina mukadzi, ari HIV negative seniwo. Vanoda ndibatei pa0734 338 285.
Ndiri mukomana ane makore 21 ndiri kutsvagawo musikana anonamata ane makore 18-19. Ndibatei paWhatsApp pa0733 363 365.
Ndiri musikana ane makore 21 ndinodawo mukomana ari pachokwadi anokwanisa kundichengeta. Fonai pa0782 031 980.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 26. Anoda nhamba dzangu 0776 393 598, ndiri paWhatsApp.
Ndiri mudzimai ane makore 32 nevana 4 asi vakura uye vanogara nevabereki vangu. Ndinodawo murume ane makore 35 – 36 ane vana. Anotya Mwari ngaandibate pa0776 907 948
Ndiri mukomana ane makore 30 ndiri gweta kuBulawayo uye ndinotsvakawo musikana ane makore 25 akasvika Form 6. Nhamba dzangu 0714 861 463
Makadii veKwayedza? Vaimbofona pa0777 278 786 chiregai ndakawana wandaida.
Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvagawo mudzimai ane makore 23 kusvika 30 anoda zvekuvaka musha kunyangwe anoshanda. Ndine mwana mumwe chete, ndibatei pa0714 002 343.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo murume wekuchembedzana naye akavimbika ane makore 44 kusvika 46, anonamata anogeza uye ari HIV negative. Nhare yangu 0779 400 682.
Ndiri mukomana ane makore 21 ndiri kutsvaga musikana wekushamwaridzana naye ari pachokwadi ane makore 18-19 wekuKadoma. Anondibata paWhatsApp pa0774 541 352.